भिडियो: अर्कै आईमाईसँग लागेर श्रीमती मार्ने यि पापी श्रीमान्, २५ दिनपछि कंकाल भेटियो – Gulminews
Home/भिडियो/भिडियो: अर्कै आईमाईसँग लागेर श्रीमती मार्ने यि पापी श्रीमान्, २५ दिनपछि कंकाल भेटियो
भिडियो: अर्कै आईमाईसँग लागेर श्रीमती मार्ने यि पापी श्रीमान्, २५ दिनपछि कंकाल भेटियो
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ असार २६, बिहीबार ००:५५ मा प्रकाशित
एक हप्ता अगाडी एकाबिहानै एक जनाले फोन गरे, लौ न हजुर मेरी श्रीमती हराईन् तपाईहरुको च्यानल मार्फत खोजिदिने पहल गर्नु पर्‍यो भनेर । तपाईंको च्यानल हेरेर कतै मेरी श्रीमतीको बारेमा पत्ता पो लाग्छ कि भने उनले । हातमा श्रीमतीको फोटो सहित रोई कराई गर्दै अनेक बिलौना गरे ति श्रीमानले ।
अन्तर्वाताको क्रममै श्रीमतीसँग बिताएका हरेक पलको बेलिबिस्तार लगाउँदै रुवावासी समेत गरे उनले । त्यतिबेला अन्तर्वाता लिने र समाचार बनाउने मेरो साथी टि.भीलाई थाहै भएन उनले आँफैले आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेर उनै श्रीमतीलाई खोज्ने भन्दै मिडियालाई नै बकम्फुसे बनाई रहेका रहेछन् भनेर ।
सोही मिडियाले केही दिनपछी घटनाको फलोअप गर्न जाने तैयारी गरिरहेको बेला अचानक खबर आयो पोखराको पुम्दी भुम्दीमा एक जना महिलाको अस्तिपन्जर सहितको शव भेटियो भनेर । आखिर बुझ्दै जाँदा त्यो अस्तिपन्जर फलोअप गर्न जान लगेको तिनै हराईकी भनिएकी लक्ष्मी नेपाली परियारकै रहेछ ।
मिडियालाई झुटो खबर दिएर प्रयोग गर्ने उनै रमेश नेपालीकी श्रीमती हुन् उनी । खासमा अस्तिपन्जर भेटेसी कसरी आफ्नै श्रीमानले हत्या गरेको खुल्यो ? प्रहरी के भन्छन् ? घरपरिवार के भन्छन् ?